7 Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa
Zaridaina maitso, tongotra lavitra lalana eny an-tendrombohitra, ary tsara ny andro sy mahafinaritra raha tsy mahafinaritra ny any ivelany. Ny tanànan'ny kosmopolitanana any Eropa dia manana ny zavatra rehetra mba hahafahanao manandrana ny hetsika ivelan'ny any ivelan'i Eropa. Avy amin'ny bisikileta ao Amsterdam ka mikoriana ao Munich, ireo 7 tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa dia ny toerana fialantsasatra mety.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Ny tranokala tapakila tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao.
1. Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa: Amsterdam, The Netherlands
Rehefa miorina manodidina ny lakandrano ny tanàna, fehezina handany ny fialantsasatra any ivelany ianao. Amsterdam dia fantatra amin'ny anarana hoe tanàna be bisikileta indrindra any Eropa. Tsy fitaovam-pitaterana fotsiny ny mandeha bisikileta fa fomba fiaina iray eo an-toerana.
Ny bisikileta dia asa lehibe any ivelany, ho an'ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana. Safidy iray hafa ny fikarohana ny tanàna ambony sambo, eo ambanin'ny tetezana mahafinaritra sy ny maritrano fanaovan-trano holandey. Eny an-dàlana, azonao atao ny misotro toaka any amin'ny cafe boa hafa na trano fisakafoanana manintona eo amoron'ny ony Amstel.
Rivotra madio, lanitra manga, ary ny fanovana ny tontolony dia ataovy izay toerana mety indrindra hijanonana ho mavitrika sy amin'ny endrika mandritra ny fialantsasatra.
2. Geneva, Soisa
Suisse no manana ny fomba fijery be indrindra any Eoropa, ary i Genève dia voahodidin'ny natiora manaitra. Noho izany, Ny mponina no manome ny fomba fijery sy tany manodidina azy, mijanona any ivelany sy mavitrika. Ohatra, Lake Geneva, fantatra amin'ny anarana hoe Lake Leman dia fanatanjahan-tena amin'ny rano.
Mandeha lakana, fanjonoana, taranja kayak, lomano na rafting, dia hetsika vitsivitsy vitsivitsy hatao any amin'ny Lake Geneva. Afaka manofa sambo ianao, na haka lafo vidy sambo mandeha.
Raha olona tendrombohitra ianao, avy eo ny lalan'ny Soisa Alps dia lavitra kely ny tanàna. Mountain mitaingina bisikileta, tongotra lavitra, filasiana, ary ny fanaovana ski ao amin'ny ririnina dia asa goavana hankafizana any Geneva.
3. Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa: Munich, Alemaina
Munich no trano iray amin'ireo lehibe indrindra valan-javaboahary eto amin'izao tontolo izao, Anglisy anglisy. Tany maloto sy maitso dia mety amin'ny fihetsiketsehana ivelany, ka nametraka an'i Munich eo an-tampon'ny 7 tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Europe.
Ao amin'ny zaridaina anglisy, afaka mijanona ho mavitrika ianao, amin'ny alàlan'ny fihazakazahana na tongotranana, eo amin'ny piknikin'ny rano, Masoandro-fandroana, sy milomano. Lehibe iray lehibe ho an'ny hetsika ivelan'ny any Munich dia ny renirano Eisbach, ao amin'ny zaridaina anglisy. Toerana ankafizin'ny mpisera izy noho ny onja onjam-peo sy mampihatra ny hetsika.
Mijanona ao an-tanàna na miainga mankany ambanivohitra, Vienna dia tanàna lehibe iray hanaovana hetsika ivelan'ny any Eoropa. Mitsangantsangana amin'ny Danube, na mivoaka ivelan'ny foibe be olona mankamin'ny Lainzer Tiergarten tahiry voajanahary, Vienna dia manana hetsika maro any ivelany izay atolotra ho an'ny karazana mpandeha.
Raha manapa-kevitra ny hijanona eo afovoany ianao, iray amin'ireo fomba tsara indrindra hitsangatsanganana dia ny fizahantany Segway na fitsangantsanganana anaty renirano Danube. fa, raha aleoko mandinika an'i Vienna toy ny eo an-toerana, ary mahita ireo vatosoa miafina, dia tonga lafatra ny tahiry voajanahary.
25 sq km ny ala sy bibidia miandry anao ao amin'ny valan-javaboary lehibe indrindra any Vienna. Mandeha manodidina, miaraka mihazakaza, na manana sary an-tsaina ao amin'ity oasis maitso ity, dia hanao ny Viennese fialantsasatra tanteraka.
5. Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa: Zurich, Soisa
Rehefa manodidina ny havoana sy ny toeran'ny tendrombohitra Alpine, ary farihy manaitra, fehezina ho iray amin'ireo tanàna tsara indrindra ianao ho an'ny hetsika any ivelany any Europe. Zurich dia tanàna mahafinaritra sy manentana, izay ahafahanao mandeha dia mitaingina ny lamasinina SZU mankany amin'ny tilikambo fandinihana. Any amin'ny Uetilberg no misy azy io, Tendrombohitra mahafinaritra ny tanàna misy fomba fijery mahafinaritra ny manodidina.
Raha tianao tongotra lavitra, avy eo dia afaka miakatra midina eny afovoany ianao amin'ny alàlan'ny lalan'ny dia an-tongotra avy any Uetilberg. Ny hetsika ivelan'ny tanàna hafa iray hafa any Zurich dia mankafy eo amin'ny sisiny ankavanan'ny renirano, ao lalao lalao volley amoron-dranomasina na haka aina fotsiny, ao amin'ny Flussbad Oberer Letten, ny toerana mihantona eo an-toerana.
Raha tianao ny hanao izany toa ny mpizahatany any Zurich, avy eo, mandehana amin'ny sambo iray hamonjy sambo eny Limmatschifffahrt izay hitondra anao eo ambany tanàna 7 tetezana.
Tafiditra any Zurich amin'ny lamasinina
Lucerne mankany Zurich amin'ny lamasinina
Lugano mankany Zurich amin'ny lamasinina
Geneva mankany Zurich amin'ny lamasinina
6. Nice, Frantsa
Mihazakazaka na mankafy milomano maraina eny an-dranomasina, dia iray amin'ireo asa manaitra indrindra. Na dia eo am-pialan-tsasatra aza ianao, mijanona ho mavitrika ary mandanjalanja amin'ny manandrana sakafo any an-toerana ary manala baraka ny tenanao. Ambonin'izany rehetra izany, Mahatsiaro ho mahatalanjona ny toe-tsaina mavitrika rehefa manentana anao ny Riviera frantsay ary mampiditra angovo sy angovo c.
Nice dia tanàna mahatalanjona ho an'ny hetsika ivelany any Eropa. Mitaingin-tsoavaly eny amoron-dranomasina, lomano, mitady ranomasina-dranomasina, ary manana fitsangatsanganana amin'ny filentehan'ny masoandro dia hetsika rehetra ivelan'ny any ivelany mba hankafy ny tsara indrindra amin'ny Riviera frantsay.
7. Tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa: Florence, Italia
Florence dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Italia. Azonao atao ny mahita ny tanàna toa mpizahatany rehetra, na amin'ny fomba manokana sy tsy hay hadinoina tanteraka. Ny fitsangatsanganana na bisikileta mamaky ny mari-pamantarana sy ny fomba fijery dia hetsika roa mahaliana any Florence.
Na izany aza, raha te-hanandrana hetsika ivelany roa miavaka ianao, sy ny vitsivitsy amin'ireo hetsika tsara indrindra any ivelany any Eropa, avy eo manandrama sidina rivotra mafana sy sidina an-danitra. Mahatalanjona ny maritrano sy tanimbarin'i Florence ary manaitra ny sainanao avy any ambony.
Raha te-hikapoka ny haben'ny mpizahatany ianao ary manandrana hetsika ivelany any ivelany, Avy eo i Florence dia tanàna mahavariana ho an'ny hetsika any ivelany any Eropa.
Genoa mankany Florence amin'ny lamasinina
Parma mankany Florence amin'ny lamasinina
Milan mankany Florence amin'ny lamasinina
Venise mankany Florence amin'ny lamasinina
Asa ivelan'ny trano any Eropa
Feno tsy ampoizina ny momba an'i Eropa. Na firy na firy ny nitsidihananao an'i Eropa, misy foana ny fitsangatsanganana vaovao. Our 7 tanàna tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelan'ny trano any Eropa dia mety ho an'ny mpitsangatsangana sy mpitsangatsangana mitady fientanam-po. Ankoatry ny, ho anao izay te hijery tsotra izao ny eny ivelany sy ny tontolon'ny tsara tarehy.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao hahita ny tapakilan'ny fiaran-dalamby mora indrindra amin'ireo hetsika ivelany ireo.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Tanàna 7 tsara indrindra ho an'ny hetsika ivelany any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
fiaraha-mientana frenchriviera ivelan'ny trano Asa ivelan'ny trano Tranride Train Travel traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna